Weeraro Ka Dhacay Xaafada Maana-booliya Ee Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Weeraro Ka Dhacay Xaafada Maana-booliya Ee Muqdisho.
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in xalay fiidkii Ciidamada Mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada Muqdisho ay fuliyeen howlgallo lagu beegsaday Saraakil iyo Askar ka tirsan Kooxda Ridada Somaliya.
Howlgalladaan oo ka dhacay Xaafada Maanabooliya ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay Sargaal Sare oo ka tirsanaa Kooxda Ridada Somaliya , kaasi oo lagu magacaabi jiray Nuur Iley.
Geesiyadii fuliyay weerarkasi ayaa soo qaniimeystay qori uu watay Sargaalkan la dilay.
Sidoo kale isla xaafada Maanaboliya waxaa xalay Mujaahidiinta ku dileen Askari ka tirsanaa Maleeshiyaadka Murtadiinta .
Goobta lagu dilay Sargaalka iyo Askariga ayaa waxaa durbadiiba soo gaaray Maleeshiyaad ka tirsan Kooxda Ridada Somaliya kuwaasi oo goobta ka qaaday Baqtiga Sargaalka iyo Askariga la dilay.
Howlgallada ay Xalay Mujaahidiinta ka fuliyeen Magaalada Muqdisho ayaa imaanaya xili habeen hore Mujaahidiin Howlgall isku jira dilal qorsheysan , Qaraxyo, iyo dagaallo toos ah ay ka fuliyeen gudaha Magaalada Muqdisho gaar ahaan xarumo ay ku sugnaayeen Maleeshiyaadka Murtadiinta.
Weerarada Mujaahidiinta ayaa kusi xoogeysanaya caasimada tan iyo markii laguda galay Bisha Barakeysan ee Ramadaan.
Howlgallada Mujaahidiinta ayaa lagu dilay Saraakiil, iyo Maleeshiyaad ka tirsan Murtadiinta , iyadoona cabsi iyo walwal xooggan uu la soo gudboonaaday Hoggaanka Kooxda Ridada Somaliya oo ku aadan xaalada Amni ee Magaalada Muqdisho oo faraha ka baxday, iyo Camaliyaadka Mujaahidiinta ee ku sii kordhaya Magaalada .